विविध – Page9– Fewa Times
भुलेरपनि यी राशि हुने ब्यक्तिसँग प्रेम नगर्नुस, नत्र..
आउनुहोस् जान्नुहोस् तपाईको कस्तासँगको सम्बन्ध राम्रो र नराम्रो हुन्छ । यसबाट तपाईंले कस्तासँग विवाह गर्न हुँदैन भन्ने सहजरुपमा थाहा पाउन सक्नुहुने छ । मेष राशिः यस राशिका मानिस बहुत साहसी, स्वतन्त्र तथा भावुक हुने गर्छन् । यसकारण मेष राशि भएकाले वृष राशि भएकासँग विवाह कहिले पनि गर्न हुँदैन । किनकी......
यी २० वर्षिय अर्बपति युबती जसले जित्दैछिन् फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्गलाई, उनको कमाई सुन्दा अचम्ममा पर्नुहुन्छ !
काठमाडौं – अमेरिकाको कार्दशीयन परिवारकी सदस्य तथा रियालिटी टिभी स्टार काइली जेनर अहिले २० भइन् । तर, उनको कमाइ ९० करोड डलरभन्दा धेरै पुगेको छ । केही समयअघि काइलीको सम्पति विश्व चर्चित म्यागजिन ‘फोब्र्स’ले सार्वजनिक गरेको हो । सोशल मिडिया कम्पनी फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जब २३ वर्षका थिए, तब......
धनी हुने व्यक्तिको हातमा यस्तो रेखा हुन्छ, के तपाईको हातमा पनि यस्तो रेखा छ ? (पुरा पढ्नुहोस्)
काठमाडौँ – आज हामीले धनी हुने ब्यक्तिका हातका रेखा कस्ता हुन्छन् भन्ने विषयमा चर्चा गरेका छौं । जौको चिन्ह : समुन्द्र शास्त्रका अनुसार जुन ब्यक्तिको हातमा औंलाको जौ जस्तो चिन्ह हुन्छ त्यस्ता ब्यक्ति निक्कै धनीमानी र सुखी हुने बताइन्छ । यो चिन्ह हुने ब्यक्ति भाग्यमानी पनि हुने गर्छन् । समाजमा......
नामको पहिलो अक्षरबाट थाहा पाउनुस् आफ्नो जीवनको गोप्य कुरा
तपाईंको नामको पहिलो अक्षरले बताउँछ कि तपाईं कुन प्रकारको व्यक्ति हुनुहुन्छ र तपाईं आफ्नो जिन्दगीमा के – कस्ता कुराको सामना गर्नसक्नुहुन्छ । नाममा त्यो शक्ति हुन्छ जसले तपाईंको जीवनलाई आकार लिनमा मद्दत गर्दछ । आउनुहोस्, तपाईंको नामको पहिलो अक्षरको के अर्थ हुन्छ थाहा पाऔँ । A यदि नामको पहिलो अक्षर A बाट......
काठमाडौँ – तिहारमा दिदी बहिनीले सेल रोटी पकाएर दाजु भाईलाई खुवाउने प्रचलन नेपाली समाजमा परम्पराबाट नै चल्दै आएको हो। कतिपयलाई सेलरोटी खान निकै मनपर्ने भएपनि पकाउन भने गाह्रो मान्दछन्। तर यो तलको विधि अपनाउनु भयो भने सेल रोटी सजिलो तरिकाले बनाउन सकिन्छ । हेर्नुहोस् तलको विधि : आवश्यक सामग्री : चामल......
जानीराखौँ ! तिहारमा माता लक्ष्मीको पूजा गर्दा कस्तो तस्बिरमा गर्ने कस्तोमा नगर्ने ? कुन शुभ कुन अशुभ ?
काठमाडौँ – दिपावलीको दिन गरिने महालक्ष्मीको पूजामा यस प्रकारको तस्बिर आवश्यक हुन्छ। त्यस्ता केहि तस्बिरहरु समेत बजारमा पाउने गर्छ जसमा पूजा गर्दा विभिन्न सामस्याहरु आईपर्ने गर्छन। त्यसैले यो निकै महत्वपूर्ण विषय रहेको छ। १. पैताला देखिएको हामीले दिपावलीको दिन पूजा गर्ने लक्ष्मीको तस्बिरमा......
R बाट नाम सुरु भएका मानिसको यस्तो हुन्छ स्वभाब, R बाट नाम आउनेले अवश्य पढ्नुहोस्
‘R’ बाट नाम सुरु भएका मानिसहरुको गुण ९ अंकसँग मेल खानेगर्छ । यस्ता व्यक्तिहरुमा सहनसक्ने क्षमता, बुद्धिमान र मानवता जस्ता गुणहरु उच्च हुने गर्छन् । विचारका हिसाबले पनि उनीहरु अरुको अगाडि डिप्लोम्याट जस्तै देखिन्छन् । व्यक्तिगत चरित्रमा पनि उनीहरु बलियो हुने गर्छन् । उनीहरुमा सोच्न सक्ने क्षमता, दया,......
यी ३ राशि भएका महिला आकर्षक साथै ज्ञानी पनि हुन्छन्, प्रेममा कहिल्यै दिदैनन् धोका !
पुरुषले खोजे जसतै गुण भएका महिलाहरु विशेषतः निम्न ३ राशीका रहेको छन्। वृष राशि – वृष राशि भएका महिलाको व्यक्तित्व निकै आकर्षक हुने गर्दछ। जसका कारण पुरुषहरु छिट्टै आकर्षित हुने गर्छन्। – मिहेनतको मामलामा वृष राशी भयेका महिलाहरु अगाडी रहने गर्छन भने जाँगर भएका कारण पुरुषको रोजाईमा छिट्टै पर्ने त......
मेरो पहिलो डेटिङ…
प्लस टु पढ्दै गर्दा लब गर्नपर्छ भन्ने कहिल्यै लागेन । प्रेमीको हात समातेर मस्किने रहर पनि भएन । दिदी बेलाबेलामा सम्झाईरहनुहुन्थ्यो – ‘जमाना खराब छ कालु । लब त ब्याचलर सकेपछि गर्नपर्छ ।’दिदीको कुरा कहिल्यै नराम्रो लाग्दैनथ्यो । सबै कुरा आफैँले अनुभव गरेर बुझ्नलाई जिन्दगी छोटो छ । आफुभन्दा ठुला......
भुलेरपनि मंगलबारको दिन नगर्नुहोस् यी ५ काम जसले जिबनमा धेरै समस्या आउँछ
मंगललाई सबै ग्रहमध्ये क्रुर र रक्तपातको ग्रह मानिएको छ । मंगलको रातो रंग मृत्यु वा रगत सँग हुन्छ । धर्म शास्त्रका अनुसार मंगलबारको दिन निम्न काम बर्जित गरिएको छ । यी काम मंगलबार गर्दा तपाइँको जीवनमा समस्या बढ्न सक्छन् । के हुन् त मंगलबारको दिन गर्न नहुने कामहरु ? थाहा पाउनुहोसः १. मंगलबारको दिनमा पशु......